Nhau - STELL COSTS KUWEDZERA KUKONZESA VANHU VEMITANDA
STELL ZVINOKOSHA ZVINOGONA KUKONZESA MACHINERY VANOGADZIRA
Muna Kubvumbi 2020, mutengo wesimbi wepamba uchiri kungachengetedzwa kungangoita 3100 yuan / ton, nepo muna Chivabvu 2021, mutengo wesimbi remangwana wakaramba uchikwira kusvika kuma6200 yuan / ton, mutengo wakakwira zvakapetwa ruviri, uchirova rekodhi nyowani.
Iko shanduko yemutengo wesimbi, zvakakonzera a kuita kukuru ku ChiChinese indasitiri yekugadzira, kunyanyaly, kune iwo manifaturing maindasitiri ayo inoshandisa yakawanda simbi, senge indasitiri yekufambisa, indasitiri yemidziyo yemumba, michina yekugadzira, nezvimwe zvikonzero zvikuru zvekukwira kwemutengo wesimbi hazvisi chete nekuti mari yakadarika sundira kumusoro kukosha kwezvigadzirwa , asi zvakare nekuda kwe iyo COVID, kuwedzera kwekudyara muzvivakwa uye zvipingamupinyi mukufambisa, zvakare kukwidza mutengo wezvinhu zvakagadzirwa. Chimwe chikonzero ndechekupa uye kudhara hukama hwekunze simbi ore kuChina.
Nekuda kwekuwedzera kwemutengo wezvinhu zvakasvibirira, mutengo wekugadzirwa kwemugadziri unowedzerawo. zvinotora nguva kubva mutengi aise odha yacho tenga zvigadzirwa uye tanga kugadzira michina. Munguva ino, mutengo wezvinhu zvakagadzirwa unokwira nekukurumidza uye zvisingatarisirwe.Izvi zvinoreva after vagadziri vanogashira maodha, mutengo unokwira nekukurumidza kusvika padanho rekurasikirwa usati waendesa. Zvisinei, chibvumirano chinogonaisingachinjwe zviri nyore, tisingatauri kuwedzera mutengo. Izvi inotungamira ku kuderera kwe purofiti margin yeiyo vagadziri vemidziyo zvichirambaZvinoenderana neazvino maitiro esimbi mutengo unokwira, kana ivo vagadziri wedzera mutengo futi, vatengi havagutsikani,ipapo kanzura maodha, mhedzisiro kune vagadziri iko kudzikiswa kwemirairo uye zvakatonyanya.
Parizvino, simbi mitengo iri kunetsekana kudzikisa kune yapfuura nhanho munguva pfupi, kuchine nzvimbo ye achisimuka, tinoda gadzirira zvakanaka mutengo unowedzera wemarudzi ese ezvigadzirwa. Zvichakadaro, isu tinotarisira kuti vatengi vachatora zvine hungwaru pakutenga. Kana’s kuomarara kudiwa, yekutanga ichitenga zvirinani.